Fahatrarana ny ‘pic’, fizarana fanampiana sy fanisam-bahoaka vaovao... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fahatrarana ny ‘pic’, fizarana fanampiana sy fanisam-bahoaka vaovao, ambana handravana ‘pavillon’, tsikeran’ny mpanao politika, maty mitombo isa.
Ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana faha 11 isika hatramin’ny sabotsy 8 aogositra 2020 nanambarana ny didim-panjakana mifandraika amin’izany. Narahan’ny fepetra samihafa, tao anatin’ny resaka nataon’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, nalefa tamin’ny TVM sy RNM ary ny televiziona sy radio tsy miankina rehetra, ny alin’ny alahady 9 aogositra 2020, nandritra ny ora roa sy sasany mahery. Na dia mbola tsy tapitra aza ny ady amin’ny ‘covid-19’, dia nambaran’ny filoha fa efa tratra ny ‘pic’ amin’ny fivoaran’isa amin’ny faritra tena nahitana ny tranga betsaka toa an’Analamanga sy Toamasina 1 sy 2, ary hita ho betsaka ny sitrana raha mitaha amin’ireo tratran’ny aretina. Mbola ambany noho ny salan’isa eran-tany, hoy ny filoha, ny taham-pahafatesana amin’ireo tratran’ny aretina eto amintsika izay eo amin’ny 1% raha 2% ny ao Afrika ary 3,8% ny eran-tany. Anton’izany, hoy izy, ny fisotroan’ny olona CVO izay nizarana ‘pack’ miisa 1 890 051 manerana ny Nosy. Nasongadin’ny filoha tamin’io fotoana io ihany koa ireto zavatra ireto : fanavaozana ny kara-pokontany rehetra ary atao ‘digitalisation’ sy nanomezany ohatra ny eny amin’ny fokontany misy azy ao Ambatobe, misy ‘code barre’ ; vola 72 miliara Ariary no atokan’ny fitondram-panjakana ho an’ny sosialim-bahoaka ka ao anatin’izany ny fividianana ny vokatry ny tantsaha amin’ny faritra sasany ; fisamboram-bola amin’ny CNaPS azon’ireo mpiasa misoratra ao atao ka 200 000 hatramin’ny 500 000 Ariary tsy misy zana-bola ary haverina manomboka amin’ny volana janoary 2021 amin’ny 10%-n’ny karama. Tsy dia niova firy raha mitaha amin’ny teo aloha ny fepetran’ny fihibohana amin’ny hamehana ara-pahasalamana 15 andro faha 11, fa ho an’Analamanga dia nitombo kosa hatramin’ny 5 ora ny fe-potoam-piasana sy ny fisokafan’ny fivarotana. Tsy mbola misy fitateram-bahoaka taksibe, tsy mbola misokatra ny zotra nasionaly.
Tsikaritra ny fifanoheran-kevitra teo anivon’ny fitondram-panjakana tamin’iny herinandro iny momba ny fanomezana fanampiana ny olona ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao, araka ny fampitam-baovao samihafa. Maro ireo fanehoan-kevitra, indrindra tamin’ny haino aman-jery tsy miankina. Raha nanambara ny fahazoan’ny rehetra ny fanampiana sosialy ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, teny an-kianja tamin’ny fihaonany tamin’ny mponina tao Antananarivo, dia misy ny fanaovana lamina vaovao ka nampiatoana ny fizarana aloha, araka ny nambaran’ny mpikambana sasany ao anivon’ny governemanta sy ny governoran’Analamanga tamin’ny 6 aogositra, ka hanaovana indray ny fanisam-bahoaka hahitana marina ny mponina tokony hisitraka izany any anivon’ny fokontany. Ifampizaran’ny minisitera ny fanaovana ny fanisana miaraka amin’ny mpitandro filaminana. Noheverina fa ho vita talohan’ny 11 aogositra ny fanisana satria ny 11 aogositra no voalaza fa hitohizan’ny fizarana ny tosika fameno sy vatsy tsinjo.
Tanteraka tamin’ny 10 aogositra teny Bel’Air Antananarivo ny fikaonan-dohan’ireo mivondrona ao amin’ny RMDM, Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara, araka ny nampitaina tamin’ny haino aman-jery samihafa. Nandinika ny toe-draharaham-pirenena nambarany fa misy lesoka maro toy ny fitantanana ny hamehana ara-pahasalamana tsy manaraka ny fepetra apetraka sy tsy fisian’ny mangarahara ireo nivory izay nizara ho vaomiera. Voalaza fa aorian’ny fihibohana ny tohin’ny hetsika.
Ankoatra ny hamehana ara-pahasalamana, dia re tamin’ny haino aman-jery samihafa ny handravan’ny ao anivon’ny kaominin’Antananarivo renivohitra ireo ‘pavillons’ etsy amin’ny ‘esplanade’ Analakely, araka ny fanapahan’ny ben’ny Tanàna. Fanapahana ny fifanarahana tamin’ireo mpivarotra izay nampiasa vola no dikan’izany ka nampiaka-peo ireo voakasika. Fantatra koa fa misy ny taratasy nalefan’ny ben’ny Tanàna amin’ny mpitantana ny radio sy televiziona MBS milaza ny fanafoanana ny fifanarahana hahazoa-mampiasa ny tany misy ny MBS eny Anosipatrana, ka fe-potoana enim-bolana no tokony hialan’ny MBS amin’ny toerana. Namaly izany ny filoham-pirenena teo aloha, Ravalomanana Marc, fa tsy azo atao izany fa misy ny fifanarahana ‘bail emphytéotique’ momba izany, araka ny nampitain’ny haino aman-jery tsy miankina samihafa.
Mitohy ny fanomezana ny antontanisa isan’andro momba ny ‘covid-19’ amin’ny haino aman-jery entin’ny mpitondra teny ofisialy, ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle. Ny isan’ny sitrana sy ny tranga vaovao no asongadina tao ho ao ka ahitana fa be kokoa ireo sitrana noho ny tranga vaovao. Misy kosa ireo lavo saika isan’andro, ka nahatratra 156 izany hatramin’ny 12 aogositra raha 127 ny fitambarany tamin’ny 5 aogositra. Na izany aza, dia nanentana hatrany ny Profesora fa mbola ilaina ny fitandremana amin’ny fanarahana ny ‘gestes barrières’ rehetra toy ny fanaovana maska, ny fanajana ny elanelana iray metatra, ny fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony na amin’ny ‘gel hydroalcoolique’.